Umshini Waphansi (2) Ifektri - Umshini Waphansi WaseChina (2) Abenzi, Abahlinzeki
Umshini osebenzela phansi olula ukusebenza, ophephile futhi omuhle kakhulu wokuhlanza umphumela
Ifanele ikakhulukazi ukuhlanza ukhaphethi, phansi, ukupholisha ngejubane eliphansi ngezinhlobo ezahlukahlukene zephansi nokufaka indawo yamatshe amahhotela, izindawo zokudlela, izakhiwo zamahhovisi namahholo okubukisa.
Umshini wokuxubha wumshini odingekayo wokuxubha phansi kanzima, umshini onejubane eliphansi (154rpm), lapho iphansi lakho linokungcola okusemhlabathini okudingeka ukuthi ufake imisipha ethile ekuhlanzeni, usebenzise kangcono isixazululo sokuhlanza, usebenzise ibhulashi hlanza isitezi sakho. Umshini wokuxubha osebenza ngemisebenzi eminingi kulula ukusebenza, uphephile futhi unomphumela omuhle kakhulu wokuhlanza. Ifanele ikakhulukazi ukuhlanza ukhaphethi, phansi, ukupholisha ngejubane eliphansi ngezinhlobo ezahlukahlukene zephansi nokufaka indawo yamatshe amahhotela, izindawo zokudlela, izakhiwo zamahhovisi namahholo okubukisa.
Yimisebenzi eminingana yokulungisa isibambo ivumela ukusebenza okulula nokulula.
Yakhelwe ngebhokisi lamagiya, i-double-capacitor motor namandla aphezulu enza umshini uphephe futhi ube namandla.
Imoto ye-AC monopole asynchronous yenziwa ngokungenisa insimbi eyinsimbi ebandayo engenisiwe
amashidi ekhwalithi ephezulu, ngakho-ke inamandla amakhulu, ukulahleka okuphansi nokushisa. Isinciphisi esinamagiya eplanethi senziwe ngezinsimbi zekhwalithi ezisezingeni eliphakeme ukuze kuncishiswe umsindo nama-thegears angama-helical enziwe nge-POM ngekhwalithi ephezulu.
Inokubukeka okuhle futhi okuyimfashini futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ngemuva kokufaka i-wax yokupholisha indawo ephansi iyakhanya njengesibuko.
Idizayinelwe ukupholisha phansi kwazo zonke izinhlobo zejubane lezinto zamatshe yi-1500 rpm imoto iboshwe ngokuphelele.